မှတ်တမ်း « MMWeather Information BLOG
By mmweather.ygn, on May 24th, 2014%
ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မုန်တိုင်းအန္တရာယ် စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ကြောင်းတွေ့ရပြီး၊ မေလ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ သြရိသကမ်းခြေ Puri မြို့နှင့် Brahmapur မြို့များအနီး ပင်လယ်ပြင်တွင် . . . → Read More: INVEST 92B အား ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်း – ၆ – Final post for 92B
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မှတ်တမ်း, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း INVEST-92B, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် MMWeather ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ..
By mmweather.ygn, on May 23rd, 2014%
ကျနော်တို့ရဲ့ MMWeather က မိုးလေဝသပညာရှင်တွေ မပါဘဲ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေနဲ့ မိုးလေဝသပညာရဲ့ အတိမ်အနက်-သဘောသဘာဝတွေကို နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်ခံရပြီးမှ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ MMWeather ရဲ့ Main website ကို http://mmweather.com နဲ့ ကြိုတင်အသိပေးချက် မှတ်တမ်းများကို http://blog.mmweather.com မှာ အသိပေး ရေးသားတင်ပြပေးနေပါတယ်။ အခုခေတ်ရဲ့ လူသိများခေတ်စားနေတဲ့ Facebook မှာ https://www.facebook.com/mmweather (MMWeather Page) နဲ့ https://www.facebook.com/groups/mmweather/ (MMweather Group) ကို လဲ တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့က ကွန်ပျူတာကို အခြေခံပြီး လေ့လာကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာတဲ့ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တွေက ခန့်မှန်းချက်တွေကို ရှာဖွေလေ့လာတဲ့အခါ တိကျသေချာမှု အရှိဆုံး မော်ဒယ်အဖြစ် “အမေရိကန်နိုင်ငံ . . . → Read More: MMWeather ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ..
Leaveacomment မှတ်တမ်း, ဆောင်းပါး mmweather ပင်လယ်(၄)ခုဖြတ်သန်းခဲ့သည် 30W – မှတ်တမ်း
Leaveacomment မှတ်တမ်း 30W, ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ်, တောင်တရုတ်ပင်လယ် မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ ရှိမည့် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်း PHAILIN
One comment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း, မှတ်တမ်း 02B, 90W, PHAILIN, စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN-02B LATEST TRACK
အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် ညပိုင်းတွင် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN သည် မူလခန့်မှန်းခဲ့သည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် ညပိုင်းတွင် – အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသပြည်နယ်နှင့် အန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှပြည်နယ်နယ်စပ်အား ဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ျေက်ာဝင်ရောက်မည့် လမ်းကြောင်း update နှင့် မုန်တိုင်း ဗဟိုဖြတ်သန်းဝင်ရောက်မည့် အနီးကပ်ပုံတို့အား အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မုန်တိုင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်စဉ် အဆင့်-၅ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးအဖြစ် ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း ၁၄ဝ နော်တီကယ်မိုင်မှ ၁၇၀ နော်တီကယ်မိုင်(တစ်နာရီ ၁၆၁ မိုင်မှ ၁၉၅ မိုင်နှုန်းခန့်အထိ)ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည် ဖြစ်ပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် . . . → Read More: အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN-02B LATEST TRACK
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း, မှတ်တမ်း အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာမည့် PHAILIN-02B
Leaveacomment MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း, မှတ်တမ်း 02B, 90W, CAT-5, PHAILIN, SUPER CYCLONE မုန်တိုင်းWUTIP အကြွင်းအကျန်များ ရွေ့လျားမှု အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on October 2nd, 2013%
မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန် 20W WUTIP 01 Oct 2013 1800Z Location: 18.9 97.3 Winds: 20 knots Central . . . → Read More: မုန်တိုင်းWUTIP အကြွင်းအကျန်များ ရွေ့လျားမှု အခြေအနေ
Leaveacomment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မှတ်တမ်း 20W, WUTIP, မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန် စုစုပေါင်း မိုင် ၂၂၇ဝ ခန့် ခရီးနှင်ခဲ့သော UTOR
Hunan ပြည်နယ်နှင့် Guangxi ပြည်နယ် နယ်စပ်ထိအောင် ၄၁ဝ မိုင်နီးပါး ကုန်းတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR(11W) သည် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတိုင်အောင် အရှိန်မသေနိုင်သေးပဲ ကုန်းတွင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့် (လေတိုက်နှုန်း 30 knots ဖြင့်) ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိသည့် NRL data များအရ သိရပါသည်။
NRL data မှတ်တမ်းအရ 14 Aug 2013 0600Z(သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီတွင် Location: 21.5 111.9(Hailing Dao ကျွန်း၊ Ducun မြို့ပေါ်မှ တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား Winds: 80 knots . . . → Read More: စုစုပေါင်း မိုင် ၂၂၇ဝ ခန့် ခရီးနှင်ခဲ့သော UTOR
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း, မှတ်တမ်း 11W, LABUYO, UTOR လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W နှင့် 95W
Leaveacomment မိုးလေဝသအခြေအနေ, မှတ်တမ်း, ဆောင်းပါး Andaman Sea, Bay of Bangal, East Phillipines Sea, NW-Pacific, South China Sea အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်း ၂၀၀၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှု အခြေအနေများ
By mmweather.ygn, on May 16th, 2012%
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမှ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဆင့်အထိ မုန်တိ်ုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အခြေအနေများအား http://weather.unisys.com/hurricane/ မှ အချက်အလက်များ ရယူ မှတ်တမ်းပြုစုထားပါသည်။
2000 Hurricane/Tropical Data for Northern Indian Ocean Individual Storm Summary
# Name Date Wind Pres Cat 1 Tropical Storm 01B (ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်) 16-18 OCT 35 –2Tropical . . . → Read More: အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်း ၂၀၀၀-၂၀၁၁ ခုနှစ် မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှု အခြေအနေများ
Leaveacomment မှတ်တမ်း Northnern Indian Ocean storms Older Entries »